Stone Umatshini atsho, isanti umatshini wokwenza, isityalo ilitye egaya
Yifowuni (isithethi IsiNgesi): +86-15921297108
Dongmeng Machinery (Shanghai) Oomatshini Technology Co., Ltd ngumvelisi ezinkulu ishishini ziquka izixhobo R & D, imveliso, atsho lokuthengisa izixhobo, eyomileyo izixhobo isanti lokuvelisa kunye ukhuselo lokusingqongileyo izixhobo mveliso. efektri yethu ibekwe Fengxian District, Shanghai, China. Sinawo mvume kwelungelo zoshishino Rhweba ngaphakathi no Rhweba, kwaye sifumana izitifiketi ISO9001: 2000 kwaye ukufikelela ezifana AAA yophawu edumileyo, njl-mveliso wethu kuphela yabanini crushers eqhelekileyo kwemihlathi, crushers ifuthe, eshukuma screens, kodwa unako ukuvelisa izixhobo lokuqala-class ezifana euro-style crushers umhlathi / crushers impembelelo yeyuro-style / compound crushers cone / crushers cone yiHydraulic / umatshini inkqubo TVSI isanti zakutshanje njalo njalo.
Le isityumzi umhlathi isebenzisa indlela igeza link. Ukongezelela, zonke umkhondo ihamba kwemihlathi okuhambisa i arc kunye mandrel njengoko sesazulwini sayo. Le setyhula arc radius lilingana umgama u...
hydraulic bemihlathi isityumzi
Imihlathi isityumzi ngesanti kubunzulu baphantsi nayo ngokuba umlomo tiger. Dongmeng Machinery bemihlathi isityumzi lisetyenziswa ukuba yaphule imbudumbudu eliphakathi nendawo ekrwada ezahlukeneyo kunye nezinto u...
Njengomshini ochotshozayo ophezulu, impembelelo yempembelelo okanye i-impact breaker ibonisa ubungakanani obuncinci, isakhiwo esilula, isilinganisi esiphakamileyo sokusetyenziswa kwamandla, ukusetyenz...
I gyratory cone isityumzi njenge uhlobo kumatshini imigodi lwaphula iinkozo ontlakantlaka le izimbiwa kunye namatye. Ngenxa yokuba iimpawu lizinga eliphezulu, isivuno eliphezulu kunye amasuntswana ezi...
Umshini wokwenza umatshini
Ukwenziwa Isanti isityalo okanye isanti ukwenza oomatshini Chinese ludlala indima ebalulekileyo kwiinkalo ezininzi ezifana ekuxhatshazweni ore, imveliso isamente, umcimbi elinjubaqa, clinker webauxite...
Le feeder neentshukumo kwakhona ngokuba feeder vibratory isetyenziselwa ukuxhasa isambuku kunye isuntswana izinto ngokuqhubekekayo kwaye ngokufanayo kwisixhobo eso siwamkelayo umyalezo ukusuka bin lok...
i swa ibhanti ulinganisa kulayishwa amandla swa Xikwembu, isantya uqhagamshelwano kwaye ubume imveliso lomba transducer Velocity ngokusebenzisa elungeleleneyo tape ubunzima isakhelo. Emva womlinganise...
Stone lokutyunyuzwa Machine
gyratory cone isityumzi
cylinder eyodwa cone isityumzi hydraulic
roll isityumzi kabini
Sand Makers & washer
isanti kunye nomgubo umahluli
bekukubi isanti somhleli
Isanti wheel wokucoca
isityalo lokutyunyuzwa mobile irabha-tyred
qha lokutyunyuzwa mobile zezityalo
Iifayile zokuqoqa uthuli